Semalt: किन इन्टरनेट मा एसईओ सीखने भ्रमपूर्ण छ
एसईओ वेबसाइटहरु को क्रममा र ट्राफिक सुधार गर्न सहायता गर्दछ। एसईओ को बारे मा अधिकांश शैक्षिक जानकारी तपाईले इन्टरनेट मा पाउन सक्नुहुन्छ शीर्ष रैंकिंग प्रकाशकहरु र एकल आला विशेषज्ञहरु बाट आउँछ। आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा, व्यावसायिक नेताहरूले त्यस्ता सामग्रीहरूमा कम भरोसा गर्ने र कम्पनीको भविष्यको प्रगतिको लागि एसईओ महत्त्वको सार बुझ्नु महत्वपूर्ण छ।
इगोर Gamanenko, को ग्राहक सफलता प्रबन्धक Semalt एसईओ बारेमा शैक्षिक जानकारी किन आफ्नो एसईओ रणनीति गलत निर्णय गर्न इन्टरनेटमा सुराकी फेला, बताउँछन्।
हामीले SEO सल्लाहको महत्वलाई बेवास्ता गर्नु आवश्यक छैन। यसको विपरित, मानिसहरूले सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ, यी सुझावहरूको उपयोग गरेर:
१. कार्यान्वयन हुनु अघि जानकारी प्रमाणित गर्नुहोस्। क्षेत्र प्रकाशकहरू द्वारा प्रदान गरिएको डाटा मेरो वास्तविकतामा तपाईं भन्दा के फरक हुन्छ।
२. बुझ्नुहोस् कि यो जानकारीले तपाईंको कम्पनीको लागि वास्तवमा के अर्थ राख्दछ र किन यो महत्वपूर्ण छ तपाईको सल्लाहलाई नझुल्काउनबाट बच्न।
New. नयाँ विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन जोखिमपूर्ण देखिन्छ किनभने समावेश भएको अनिश्चितताका कारण। यद्यपि फाइदाहरुको प्रयोगात्मक दृष्टिकोणमा फराकिलो लाग्न सक्छ।
एसईओ विश्वव्यापी छैन, र यो एल्गोरिदम, प्रतिस्पर्धाको दायरा, र व्यापार-विशिष्ट भ्यारीएबलजस्ता धेरै क्षेत्रमा फरक हुन्छ। उदाहरण को लागी, स्थानीय र राज्य एल्गोरिदम कन्ट्रास्ट। एक व्यक्ति जो स्थानीय एसईओ को बारे मा लेख खोजने को लागी राज्य एसईओ सल्लाह अप्रासंगिक पाउनुहुनेछ। फर्महरूले आफ्नो व्यवसाय मोडेलहरूमा उनीहरूको निर्णयमा आधारित अद्वितीय प्रतिस्पर्धा रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। त्यसकारण सफलताको कारक एकै छैन। एक कम्पनीले कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गरेर सफलताको अनुभव गर्न सक्दछ तर अर्कोमा असफल हुन्छ यदि उनीहरूले समान दृष्टिकोण प्रयोग गरे। अन्तमा, अनुकूलन को जटिलता दिएर परिणाम को कारण अलग गर्न गाह्रो बनाउँछ। माथि उल्लेखित कारणहरूले सफल एसईओ अप्टिमाइजेसनको लागि जटिल केस-उन्मुख दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छन्। त्यसकारण हाम्रो ग्राहकहरु हाम्रो सेवाहरु लाई विश्वास गर्छन्।
गलत सूचनाको प्रसार
आज SEO लाई प्रभावित गर्ने प्रमुख समस्या गलत सूचनाको प्रसार हो। अनजाने गलत गलत जानकारी मात्र प्रकाशकको गल्ती हो, तर उद्योग आफै। क्षेत्रको अस्थिरता डाटा उपलब्धता प्रदान गर्दछ, जुन अनुकूलकहरूको लागि मूल्यवान चीज हो। त्यसकारण, पेशेवरहरूले पुष्टिकरण हुनु अघि पनि उपभोक्ताहरूलाई जानकारी प्राप्त गर्नु पर्दछ। पाठकहरूको लागि फराकिलो प्रवृत्तिहरूको भन्दा पृथक घटनाबाट छाप बनाउनु सजिलो छ। अप्टिमाइजरहरूको बढ्दो संख्याको साथ, गलत जानकारी फैलाउने सम्भावना एकदम उच्च छ। जानबूझकर गलत गलत जानकारी स्वयं घोषित विशेषज्ञहरूबाट आउँदछन् जसको एक मात्र इमाना नाफा कमाउने हो। अधिक जानकारी को यी बिट्स कम प्राधिकरण ब्लग र फोरम बाट उत्पन्न भयो।
एक वैज्ञानिक अध्ययनले संकेत गर्दछ कि मानिसहरू शिक्षाको परम्परागत प्रकारको विपरीत गरेर सिक्न सजिलो हुन्छ। जानकारी पढ्नु र पुनर्गुर्जित गर्न यसले कसरी काम गर्छ भन्नेको व्यक्तिगत स्वाभाविक भावना विकास हुँदैन। तपाईंको आफ्नै वेबसाइट अप्टिमाइजेशनमा उद्यम गरेर, यो समस्या सहजै समस्या निवारण गर्न र उद्योग नेताहरूले पहिले विचार नगरेको समाधानको साथ आउन सम्भव हुन्छ। सल्लाहलाई बेवास्ता गर्ने, वा यो प्रश्न गर्ने हो भने, अझ बढी नवीन मार्गमा डोर्‍याउँछ। प्रदान गरिएको कुनै पनि सल्लाह उद्योगको बारेमा सिक्दा वा नयाँ विचारहरू सिर्जना गरेको बेला मात्र काममा आउँदछ। उत्तम रणनीति ईन्धनको लागि एक ले के थाहा पायो भन्नेको बारे आलोचनात्मक सोच आवश्यक छ र तपाईंको कम्पनीको विवरणहरूको आधारभूत अनुसन्धान।